လန်ဒန်ဝိဟာရကျောင်းတိုက်သည် အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို. ဓမ္မဒူတခရီး ကြွရောက်တော်မူခဲ.စဉ် ဗြိတိန်ရောက် မြန်မာတို.၏ ပူဇော်မှုကိုခံယူခဲ.ပြီး မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများအတွက် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်မြောက်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို. သြ၀ါဒမိန်.ကြားတော်မူချက်အရ စေတနာရှင်တစ်စုတို. စုပေါင်းပြီး ဦးဆောင်လျှက် The Britain Burma Buddhist Trust ကိုဖွဲ.စည်းကာ စတင်တည်ထောင်ခဲ.ပါသည်။
ထို.ကြောင်. ဤကျောင်းတိုက်သည် နှစ်အရေအတွက် ကြာမြင်.သဖြင်. ခိုင်ခံ့မှုမရှိတော.ခြင်း၊ ဘာသာရေး ပွဲတော်များအတွက် နေထိုင်စရာ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ တရားစခန်းများ ပြုလုပ်လိုသော်လည်း နေရာအခက်အခဲ ရှိခြင်းတို.ကြောင်. ယခုအခါ ပြင်ဆင်မွန်းမံခြင်းများနှင်. အသစ်တည်ဆောက် တိုးချဲ.ခြင်းများကို ဂျူလိုင်လ ၁ ရက်နေ.မှ စတင်ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စေတနာရှင်၊ ပါရမီရှင်၊ ကုသိုလ်ရှင်များအနေဖြင်. အောက်ပါလှူဒါန်းစရာများကို တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ ကုသိုလ်ဒါန အသစ် ယူတော်မူနိုင်ကြရန် နှိုးဆော်တိုက်တွန်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
တိုးချဲ.နေသော ကျောင်းတော် အဆောက်အဦးအသစ်ကြီးသည် square ပေပေါင်း ၁၂၅၀ ရှိပြီး စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေမှာ စတာလင်ပေါင် ၁၅၀၀၀၀၀.၀၀ (တစ်သိန်းငါးသောင်း) ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ Square တစ်ပေလျှင် ပေါင် ၁၂၀.၀၀ ကုန်ကျပါသည်။ ထို.ကြောင်. square တစ်ပေတစ်ကွက်ကို သီးသန်.လှူလိုသော အလှူရှင်တို.သည် မိမိတို.နှစ်သက်ရာ မြေကွက်နေရာနံပါတ်ကို ရွေးချယ်၍ လျူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင်. မိမိတို.တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ တစ်ပေါင်၊ နှစ်ပေါင်မှစ၍ လှူဒါန်းကြပါရန် အသိပေးနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
£ ၁၂၀.၀၀ ကို အရစ်ကျ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Copyright © 2019 LONDON VIHARA™ REGISTERED CHARITY NUMBER 284619